Ikhaya » Iindaba zokuhamba zaseYurophu » Amazwe e-EU axelelwe ukuba anciphise izithintelo zokuhamba kubantu abagonyelweyo baseYurophu
Amazwe e-EU axelelwe ukuba anciphise izithintelo zokuhamba kubantu abagonyelweyo baseYurophu
Abahambi be-EU "benepasipoti yokugonya" kufuneka bakhululwe kuvavanyo olunxulumene nokuhamba okanye babeke bodwa iintsuku ezili-14 emva kokufumana idosi yokugqibela.
IKhomishini yaseYurophu iphakamisa ukuba aMazwe angamaLungu ngokuthe ngcembe anciphise amanyathelo okuhamba
IKhomishini ikwacebise inkqubo "yokuqhekeza likaxakeka" kuhambo lwemida
Amazwe angamalungu azakusebenza kunye esebenzisa inkqubo yesatifikethi sokugonya ukwenza inkululeko yokuhamba ibekhona kwakhona
Lixesha lokuba amazwe angamalungu e-EU aqale ukukhulula izithintelo zemida yabo kubemi nakubantu bebhloko abagonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-19, i Komishoni yaseYurophu utshilo uMvulo.
"Njengokuba imeko yesifo iyaphucuka kwaye imikhankaso yokugonya iyakhawulezisa kuyo yonke i-EU, iKhomishini icebisa ukuba amazwe angamaLungu ngokuthe ngcembe anciphise amanyathelo okuhamba, kubandakanya okona kubalulekileyo kubanini beSitifiketi se-EUV se-Digital Digital," iKhomishini yaseYurophu ibhengeze namhlanje.
IKhomishini ikwacebise inkqubo "yokuqhekeza imeko kaxakeka" kuhambo lwemida ukuba ngaba i-COVID-19 entsha ingaqala ukunyuka, eya kuthi ikhawuleze ibuyise izithintelo "ukuba imeko yesifo iya isiba mandundu."
Ikhomishini icebise ukuba abo "banesatifikethi sokugonya" - esaziwa kakhulu njenge "pasipoti yokugonya" - kufuneka bakhululwe "kuvavanyo olunxulumene nohambo okanye babeke bodwa iintsuku ezili-14 emva kokufumana idosi yokugqibela."
UMkomishinala Wezobulungisa wase-Europe u-Didier Reynders uqaphele ukuba kwezi veki zigqithileyo "zizise ukwehla okuqhubekayo kumanani osulelo, kubonisa impumelelo yamaphulo okugonya kwi-EU yonke," kwaye wavakalisa ithemba lakhe lokuba amazwe angamalungu azakusebenzisana asebenzise isiqinisekiso sokugonya Inkqubo yokwenza inkululeko yokuhamba iphinde yenzeke.
UMkomishinala waseYurophu wezeMpilo kunye noKhuseleko loKutya uStella Kyriakides ukwayincomile inkululeko yokuhamba phakathi kwamazwe njengenye yamalungelo "e-EU", wongeza, "Sifuna iindlela ezilungelelanisiweyo neziqikelelweyo kubemi bethu ezinokuthi zicacise kwaye zithintele iimfuno ezingangqinelaniyo kumazwe angamaLungu. . ”
Inkululeko yokuhamba kwi-European Union ivumela abahlali kwilizwe elinye ukuba bahambe ngokulula, basebenze, kwaye bahlale kwelinye ilizwe.
NgokweZiko laseYurophu loThintelo noLawulo lweZifo, ngaphezulu kwe-234,000,000 yeedosi zokugonya ziye zenziwa kwi-European Union nakwindawo yezoqoqosho yaseYurophu, iJamani, iFrance, i-Itali neSpain zifumana awona manqanaba aphezulu kubavelisi.
Amatyala angama-32,364,274 e-Covid-19 arekhodwe kwi-European Union nakwiNdawo yezoQoqosho ukusukela oko kwaqala ubhubhane, kusweleka abantu abangama-720,358.